Kitra - Fifanitsanan'ny CAN :: Avelan’ny kliobany hamonjy ny Barea i Romain Métanire • AoRaha
Kitra – Fifanitsanan’ny CAN Avelan’ny kliobany hamonjy ny Barea i Romain Métanire
Tsy mba toa an’ireo klioba sasany any Eoropa mampiasa mpila ravinahitra manararaotra ny fitsipika vaovao napetraky ny Fifa. Nomen’ny Minesota United (Etazonia) alalana hamonjy ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny fifanintsanan’ny CAN i Romain Métanire, vodilaharan’izy ireo.
“Efa nampahafantarina ahy ny fandaharam-potoanan’i Métanire. Ho avy izy ary hiatrika an’ireo lalao roa hifanandrinantsika amin’i Etiopia sy Nizera”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy, tamin’ny sabotsy lasa teo. Ity mpilalao iraisam-pirenena malagasy ity, araka ny nambarany, no ho tonga voalohany any Addis Abeba.
Hafa raha samy hafa ity klioba ilalaovan’i “La Machine” ity, raha oharina amin’ireo sasany. Tamin’ny herinandro lasa teo no namoaka ny fandaharan-dalao ara-pirahalahiana hoentin’izy ireo manomana ny fifaninanampirenena ny Minesota United. Maro ireo mpankafy baolina kitra no nihevitra fa mety hody alohan’ny fotoana i Métanire, raha ny fifanindriana daty. Efa nampiseho zavatra tsy nampoizina ihany koa ity klioba ity, tamin’ny fihaonantsika sy Côte d’Ivoire ka nandefasan’izy ireo fiaramanidina manokana nakana an’ity andrin’ny Minesota United, any Etazonia ity teto Madagasikara hamonjy ny kliobany.
Hatramin’ny omaly izany dia i Nomenjanahary Lalaina na i Bôlida, izay tsy nomen’ny kliobany sy Raveloson Rayan, izay mararin’ny Covid-19 no tsy ho avy amin’ireo telopolo mirahalahy nantsoin’i Nicolas Dupuis.
Disadisam-pianakaviana :: Novonoin’ireo anadahindravehivavy izy mivady